आज मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदै - नेपालबहस
आज मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदै
२७ जेठ २०७८ | १२:१६:०९ मा प्रकाशित
२७ जेठ, काठमाडौंं । माधव नेपाल पक्षका सांसद्लाई समेत प्रवेश गराएर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजन तत्काललाई पूरा नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग रहेका सात वटा मन्त्रालयमा आजै एकलौटी विस्तार गर्ने भएका छन् ।
गएको शुक्रबार नै जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ – राजेन्द्र पक्षलाई समावेश गर्दा ओलीले आफू पक्षका अधिकांश मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुुक्त गरेका थिए । जसपाका १० जनालाई मन्त्री बनाएर बाँकी रहेको सात वटा मन्त्रालय भने उनले पूर्ति गरेका थिएनन् ।
मूलतः माधव नेपाल पक्षका केही नेतालाई आफ्नो क्याम्पमा छिराउने दाउपेचले गर्दा उनले खाली ठाउँ राखेका थिए । योगेश भट्टराई , गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भूषाल र सुुरेन्द्र पाण्डेलगायत केही सांसद्हरु आफ्नो पक्षमा आउने आँकलन गर्दै उनले सातवटा मन्त्रालय खाली राखेका थिए ।
तर विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीको मनसुवा तत्काल पूरा नहने देखिएको छ । त्यसैले आजै दुई जना पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरुलाई समाबेश गराएर ओलीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने भएका हुन् ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएका थिए । उनलाई एमालले गत उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट लडाएको थियो । तर उनी पराजीत भए । उनै खड्कालाई मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । यस्तै अर्का एकजनाको नाम दिन ओलीले रामबहादुर थापा बादलसँग आग्रह गरेका छन् ।
बाँकी ५ जना भने ओलीले आफूनिकटलाई ल्याउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा ओली अलमलमा रहेका छन् । ओलीको चाहना महेश बस्नेतलाई ल्याउने रहेको छ । तर सुरक्षा निकाय भने बस्नेतको छवि गुुण्डा नाइके रहेको भन्दै अरु नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने रहेको बुझिएको छ । त्यसैले खगराज अधिकारीको सम्भावना देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने २ मिनेट पहिले
बेलाघाट टापुमा फसेका चारको सेनाले गर्यो उद्धार ६ मिनेट पहिले
कुमारी बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च, शेयरमूल्य कति ? ९ मिनेट पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार १५ मिनेट पहिले
पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अबरुद्ध १९ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको बैकिङ सेवा ४ देखि ७ गतेसम्म बन्द हुने २१ मिनेट पहिले
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित ३६ मिनेट पहिले
बेलायतले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिने सहायता बजेट कटौती ४७ मिनेट पहिले
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले सेतीवेणीका ८ घर डुबानमा ५९ मिनेट पहिले
पोखरीमा नुहाउन गएकी बालिकाको डुबेर मृत्यु २२ घण्टा पहिले
अन्नपूर्णको युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रम प्राथमिकतामा २२ घण्टा पहिले
बागलुङमा वर्षासँगै आएको पहिरोले ५ घर विस्थापित २२ घण्टा पहिले
नेपालको उच्च शिक्षा गुणस्तर सुधारका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब दिने ३ दिन पहिले
निर्वाचन आयोगको फैसला खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको नयाँ विधिशास्त्र: भट्टराई २ दिन पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट ५३ जनाको मृत्यु २ दिन पहिले
राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसंग छलफलमा सहभागी हुने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा ५ दिन पहिले
कंगोमा ज्वालामुखी विस्फोटमा परी १५ जनाको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
बेनी अस्पतालको भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन हुन सकेन २ हप्ता पहिले
नेता भण्डारीको जन्मघर ढुङ्गेसाँघुसम्मको सडक कालोपत्रे हुने १ हप्ता पहिले
कर्णालीमा एक करोड राशीको पत्रकार कल्याण कोष ४ हप्ता पहिले
बनेपामा दुई हप्तादेखि गरिएको शिल हटाइयो २ हप्ता पहिले
निजी सवारी साधन एम्बुलेन्स बनाई हस्तान्तरण २ हप्ता पहिले
कोरोनाले डीएसपी राजकुमार केसीको ज्यान गयाे ४ हप्ता पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा थप ३२३२ संक्रमित ! ४ हप्ता पहिले
शहीद स्मारक लिग : पुलिसलाई हराउँदै आर्मी शीर्ष स्थानमा १ वर्ष पहिले
ताराखोलामा ‘हिल–सिप खेल मैदान’ निर्माण १२ महिना पहिले
प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा भारतीय काउन्सिलाई पत्र, भ्रामक सामग्री प्रशाण गर्नेलाई कारवाहीको माग ११ महिना पहिले
आगामी चैतमा बाग्मतीस्तरीय कराते प्रतियोगिता हुने ३ महिना पहिले